Famaranana ny Jobily faha-50 taonan'ny FJKM sady faha-200 taona nidiran´ny LMS teto Madagasikara | Fitandremana Ankadifotsy
Velakevitra, fitokanana ny tsangambato ary fanompoam-pivavahana tetsy Mahamasina no namaranana tamin´ny fomba ofisialy ny fankalazana an´Andriamanitra noho ny jobily roa sosona.
Famaranana ny jobily 2 soson´ny FJKM
"Ny kristiana Protestanta manoloana ny fiainam-pirenena"
Velakevitra nampitondraina ny lohateny hoe: "Ny kristiana Protestanta manoloana ny fiainam-pirenena"no nanokafana ny lanonam-pamaranana ny Jobily fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha-50 taonan’ ny FJKM sy ny faha-200 Taona nidiran’ ny LMS teto Madagasikara.
Notanterahina tetsy amin´ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana ny zoma faha-19 Oktobra 2018 lasa teo izany. Mpitandrina telo no nifandimby nitondra fanazavana sy fampianarana nandritra izany. Ny Mpitandrina RAVALINOMENJANAHARY Lala Emmanuel avy ao amin´ny FJKM Faravohitra no nitarika ny lohahevitra tamin´ny lafiny teolojia pratika sy dogmatika, ny Mpitandrina Andriamasinoro Fidimalala kosa avy ao amin´ny FJKM Avaratr’ Andohalo no nitarika ny lafiny Biblika ny lohahevitra ary ny Mpitandrina Rakotonavalona Maholy kosa avy ao amin´ny FJKM Ambohitantely no nanazava ny lafiny ara-tantara.
fitokanana ny tsangambato
Ny Sabotsy 21 octobre 2018 dia teny Ivato tao amin'ny toeram-mpanomana Mpitandrina no natao ny fanompoam-pivavahana izay notarihin' Andriamatoa MARINASY Mpitandrina ary ny nitondra ny hafatra dia Andriamatoa Lala RASENDRAHASINA Mpitandrina ka tamin'izany no nilazany fa Jesoa Kristy no hery ho an'ny mino izay nalaina avy amin´ny 2 Timoty 1: 8.
Taorian´izany ny nitokanana ilay trano mirefy 50 m x 12 m, misy rihina 3 ary mahazaka mpianatra mpitandrina eo amin'ny 250 eo. Nitohy tamin´ny fandraisam-pitenenana isankarazany nataon´ireo vahiny, ny filohan´ny faha-50 taona ary ny filohan´ny FJKM
-mitondrà tena tsara
-Manaova asa tsara
famaranana ny fankalazana tamin´ny fomba ofisialy
Ny Mpitandrina, Charles Rakotoniriana kosa indray no nitatika ny fanompoam-pivavahanany alahady 21 Oktobra 2018 ary ny filohan´ny FJKM Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina no nitondra ny tenin´Adriamanitra ka nanomezany ny fanalahidy 5 ho an´izay te-hijoro amin´ny finoana.
Taorian´ireo fandraisam-pitenenana maro samihafa dia nisy ny fandefasana voromahailàla nataon´ny filohan´ny komitin-jobily ho mariky ny fiadànana sy ny fihavanana.
Fotoana nizarana mari-pankasitrahana ho an´ny mpifaninana tamin´ny logo sy ny hira fanenva koa tamin´ ío, ho an´ireo raiamamdreny FJKM, ary ireo komitin´ny jobily. Nifarana tamin´ny asa sy fampaherezana ary fiaraha-makasary ny fotoana mba ho fahatsiarovana.
Sary famaranana ny faha 50 taonan'ny FJKM sady Faha 200 taona nidiran'ny LMS teto Madagasikara
Antoko mpihira mitambatra nanafana ny fotoana teny Mahamasina
Filohan'ny fjkm teny Mahamasina
Ireo mpitendry maneno nanafana ny fotoana teny mahamasina
Ireo vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
Pasitera teny mahamasina
Vahoakan'Andriamanitra teny Mahamasina
Panier garni-nokarakarain'ny VFD
SPIA/PS 10 taona niaraha-niasa.
HETSIKA LEHIBE F.5 KIANJABEN'I MAHAMASINA
Herinandro Masina 2019